Ny vatana mahavaky ny mpandresy ny fo vampire - Nina Dobrev - dia tena mahafinaritra tokoa tsy amin'ny akanjo hariva, fa amin'ny kiraro misokatra ihany koa. Taorian'ny nandao ilay andian-tsarimihetsika "The Vampire Diaries" mpilalao sarimihetsika Kanadiana dia nandeha nandehandeha sy nitsahatra. Herintaona lasa izay, nitsidika an'i Hawaii niaraka tamin'ireo namany ny roa vavy. Raha jerena ny sary maromaro, Nina Dobrev dia efa vonona tamin'ny sary fanatobiana - ny vatany ao anaty kiraro iray dia mahafinaritra fotsiny.
Tsiambaratelon'ny endrika tsara tarehin'i Nina Dobrev
Araka ny hevitr'ilay mpilalao sarimihetsika, ireo fitsipika manaraka ireo dia manampy azy hitazona endrika mendri-kaja ao amin'io firenena io:
Ny sakafo mahitsy amin'ny ampahany kely dia indimy isan'andro no antoka lehibe indrindra amin'ny vatana tsara tarehy. Ary mba hanomezana hanoanana, dia afaka mihinana zavatra toy ny yogourt, voankazo maina na voanjo ianao. Ny mpilalao sarimihetsika dia tia miara-misakafo amin'ny tenany manokana, satria izy ihany koa no zava-maniry.
Ao anatin 'ny tonon' ny vatany dia manatanjaka fanofanana amin 'ny gym miaraka amin' ny mpanazatra iray. 3-4 isaky ny herinandro izy dia mifandray amin'ny bikram yoga (ity dia fampiofanana amin'ny hafanana ambony ao amin'ny efitrano - eo amin'ny 40 degre).
Misy fanatanjahan-tena mavitrika koa tonga amin'ny fandaharam-potoanan'i Nina. Olona mavitrika tsy mipetraka izy. Mandihy, milomano, snowboarding, yoga sy ny sisa - ny fialam-boly rehetra ary tsy tokony hiantefa.
Nitsanga-potsiny i Glen Powell sy Nina Dobrev na nifanerasera tamin'ny fifandraisana?
Amin'izao andro izao, amin'ny fitomboana 168 cm, ny lanjan'ilay tovolahy mpilalao dia 55 kilao monja. Noho izany, Nina Dobrev dia tsy misalasala manala ny fivalany sy ny T-shirt ary mampiseho ny vatany amin'ny kiraro isan-karazany: manga, mainty, miaraka amina printy mamirapiratra sy sary. Ny tovovavy dia miavaka hatrany ary mahatsapa amin'ny foibe.
Ny tarehy ratsy indrindra amin'ny kintana
Sarah Jessica Parker tsy misy sary
Katy Perry tsy misy sary
Ny jiro mavo toy ny an'i Borodinoj
Make up of Nina Dobrev
Takolaka voahodina ao anaty fonosana
Nahoana no nofinofy ny manidina?
Pataloha tsy misy fanjaitra
Fanoroana akanjo misy sira
Inona ny fihetsik'i Wasserman?
Dior Summer of Dior 2015
Ny siramamy ao anaty vatosoa dia tsara sy ratsy
Ny saran'ny akanjon'i Kate Middleton tao Cornwall dia nanafintohina ny lohahevitra Anglisy